HCl (chloride hydrogène) => ? | Chemical Equation Balancer
HCl =? | Mpifandanjana ny fampitoviana simika
hidrôzôro klôro =?
Valiny 489 hita
levitra + NaOH → H2O + NaCl
hidrôzôro klôro sodium hidroksida rano sodium klôro
(hoy màu) (hoy màu) (hoy màu)
Fanazavana fanampiny momba ny equation HCl + NaOH → H2O + NaCl
Inona no fihetsiky ny HCl (chloride hydrogène) miaraka amin'ny NaOH (sodium hydroxide)?
Ahoana no mety hitranga sy hamokatra H2O (rano) sy NaCl (sodium klôro)?
Arotsaho amina vahaolana 0.10M NaOH ny rano indray mitete vitsivitsy amin'ny vahaolana phenolphthalein. Ny vahaolana dia mavokely. Araraka moramora ao anaty vera ny vahaolana 0.10M, araraka fotsiny ary afangaro amin'ny fotoana iray ihany.
Ny trangan-javatra taorian'ny fihetsiky ny HCl (chloride hydrogène) miaraka amin'ny NaOH (hydroxide sodium)
Ny vahaolana NaOH dia mihetsika amin'ny asidra hamoronana sira sy rano
Fanontaniana fanampiny mifandraika amin'ny fanehoan-kevitra simika HCl + NaOH → H2O + NaCl
Fanontaniana mifandraika amin'ny reactant NaOH (sodium hydroxide)
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana ny NaOH (sodium hydroxide)? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika misy NaOH (sodium hydroxide) ho reactant?
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny H2O (sodium hydroxide)? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika misy H2O (rano) ho vokatra?
Fanontaniana mifandraika amin'ny vokatra NaCl (chloride sodium)
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny NaCl (sodium hydroxide)? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika misy NaCl (chloride sodium) ho vokatra?
2levitra + Zn → H2 + ZnCl2
hidrôzôro klôro fanitso hydrogène klorida zinc
(hoy màu) (kim kim bạc xám) (hoy màu) (trắng)
Fanazavana fanampiny momba ny equation 2HCl + Zn → H2 + ZnCl2
Inona no fihetsiky ny HCl (chloride hydrogène) miaraka amin'ny Zn (zinc) ?
Ahoana no mety hitranga sy hamokatra H2 (hydrogène) sy ZnCl2 (zinc chloride) ?
Asio metaly Zn kely eo ambanin'ny fantsom-panadinana ary ampio vahaolana asidra 1-2 ml
Ny trangan-javatra taorian'ny HCl (chloride hydrogène) dia mihetsika amin'ny Zn (zinc)
Fanontaniana fanampiny mifandraika amin'ny fanehoan-kevitra simika 2HCl + Zn → H2 + ZnCl2
Fanontaniana mifandraika amin'ny reactant Zn (zinc)
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny Zn (zinc)? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika misy Zn (zinc) ho reactant?
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny H2 (zinc)? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika misy H2 (hydrogène) ho vokatra?
Fanontaniana mifandraika amin'ny vokatra ZnCl2 (chloride zinc)
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana ZnCl2 (zinc)? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika misy ZnCl2 (chloride zinc) ho vokatra?
Fe + 2levitra → FeCl2 + H2
vy hidrôzôro klôro vy (ii) klôroza hydrogène
(tắng xám) (hoy màu) (jereo) (hoy màu)
Fanazavana fanampiny momba ny equation Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
Inona ny fihetsiky ny Fe (vy) amin'ny HCl (chloride hydrogène) ?
Ahoana no mety hitranga sy hamokatra FeCl2 (vy (ii) klôro) sy H2 (hydrogène) ?
Asio fe vy vitsivitsy eo ambanin'ny fantsona ary ampio vahaolana asidra 1-2 ml ao amin'ilay fantsona
Ny tranga taorian'ny Fe (vy) dia mihetsika amin'ny HCl (chloride hydrogène)
Mahery ny asidra chlohydric. Afaka mihetsika amin'ny metaly alohan'ny hidrogen amin'ny karazana simika izy io.
Fanontaniana fanampiny mifandraika amin'ny fanehoan-kevitra simika Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
Fanontaniana mifandraika amin'ny reactant Fe (vy)
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny Fe (vy)? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika izay manana Fe (vy) ho reactant?
Fanontaniana mifandraika amin'ny vokatra FeCl2 (vy(ii) klôro)
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny FeCl2 (chloride hydrogène)? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika izay manana FeCl2 (vy (ii) klôro) ho vokatra?
hidrôzôro klôro manezioma hydrogène manezioma klôro
(hoy màu) (tắng bạc) (hoy màu) (trắng)
Fanazavana fanampiny momba ny equation 2HCl + Mg → H2 + MgCl2
Inona no fihetsiky ny HCl (chloride hydrogène) miaraka amin'ny Mg (magnésium) ?
Ahoana no mety hitranga sy hamokatra H2 (hydrogène) sy MgCl2 (magnésium chloride)?
Asio manezioma (Mg) kely eo ambanin'ny fantsom-panadinana ary ampio vahaolana asidra 1-2 ml
Ny trangan-javatra taorian'ny HCl (chloride hydrogène) dia mihetsika amin'ny Mg (magnesium)
Fanontaniana fanampiny mifandraika amin'ny fanehoan-kevitra simika 2HCl + Mg → H2 + MgCl2
Fanontaniana mifandraika amin'ny vokatra MgCl2 (chloride magnesium)
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny MgCl2 (magnésium)? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika misy MgCl2 (chloride magnesium) ho vokatra?